လိင်အတွေ့အကြုံသည်မိတ်လိုက်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နျူကလိယသည်ဆီးရီးယားဟမ်းစ်တာများ၏ dopamine တုန့်ပြန်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုသည် (1999) - Your Brain On Porn
ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1999 Feb 15;99(1):45-52.
47907-1364, USA တွင်စိတ်ဓာတ်သိပ္ပံဌာန, Purdue တက္ကသိုလ်, အနောက် Lafayette ။
ကျနော်တို့အမျိုးသမီးဟမ်းစတား၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ၏ extracellular ပြင်းအားအပေါ်ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ နျူကလိယ dopamine တိုင်းတာခဲ့သည် accumbens အတွက် Vivo microdialysis အားဖြင့် ယခင်ကသုံးကြိုတင်တွေ့ဆုံ, အထီးနှင့်အတူခြောက်လကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံပေးထား, ဒါမှမဟုတ်လိင်နုံခဲ့ကြသည်ခဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်အဖော်ရှာစဉ်အတွင်း.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများမြင့်မားယောက်ျားပစ္စုပ္ပန်အခါကာလအတွင်းမှာ dialysate dopamine အတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့ကြသမျှသောသုံးအုပ်စုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ သို့သျောလညျး ခြောက်လကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံလက်ခံရရှိကြောင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးကယောက်ျားနဲ့အတူသုံးဦးသာကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအတူလိင်နုံအမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီး၏သူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် dialysate dopamine အတွက်သိသိသာသာတိုးမြှင်နှင့်တာရှညျတိုးခဲ့။ အဆိုပါဒေတာ mesolimbic စနစ်ကတစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ထပ်ခါတလဲလဲအတွေ့အကြုံများအားဖြင့် sensitized နိုင်ဖော်ပြသည်။